जेरुसलायम सेल जहाव – Krishna Thapa
जेरुसलायम सेल जहाव
म भर्खर इजरायल प्रवेश गर्दा लगभग पाँच बर्ष अघि शुरुमा इजरायलबाट प्रकाशित हुने पत्रिका “नेपाल चौतारी”मा प्रकाशित निकै पुरानो लेख ।)
वैजनी रंगका ढकमक्क शिरीषका फूलहरु भूइँभरी पोखिएका छन् । व्यवस्थित घर अनि फराकिला भित्री सडकका ठाउँठाउँमा निर्माण गरिएका उद्यानहरुले यहाँको सुन्दरता मात्र बढाएको छैन्, विदेशबाट आएका हामी जस्ता केयरगिभरहरुको दिनाचर्या सरल र मधुर बनाइदिएको छ । होचा सिसौका पातहरु हल्लाउँदै शीतल हावा बहन थालेपछि प्रायः हरेक साँझ म मेरो बूढो साथीसँग घुम्न निस्कन्छु, अनि ऊ सधैं मर्दै र बाँच्दै गरेको यो शहरको र उसको कथा हिब्रू मिश्रित अंग्रेजीमा मलाई सुनाउन थाल्छ ।
धेरै हिउँद वर्षा काटिसकेको अरबी मूलको यो बुढो ‘जोहारिस’ मेरो अगाडि आफैंमा एउटा सिङ्गो इतिहास बनेर उभिन्छ, जसले इजरायलको विगतलाई आफैले देखेको छ, भोगेको छ र कति–कति अविस्मरणीय पलहरुलाई छातीको भित्री तहमा शिलालेखजस्तै आरुढ गराएर राखेको छ ।
मायासँग भेट नभएको पनि बर्षौ भइसकेछ ।
नेपाली नाम जस्तै लागेर म प्रश्न गर्छु— माया को थिइन ?
माया उसकी बाल्यकालदेखिकी अभिन्न साथी थिइन्, अर्थात खबेरा… लामो सुस्केरा हाल्दै ऊ सम्झन्छ – ‘माइ’ (मे) मा जन्मिएकीले माया नाम राखेको रे । यसपालीको जन्मदिनमा छोरीको घर बेरशेवा जानु अघि नै धेरै पटक उसले मायासँग फोनमा कुरा गरेको थियो । कतै कुनै सिलसिला मिलाएर भेटन पो सकिन्छ कि ! शायद यस्तै झिनो आशा उसको मनमा हुँदो हो । त्यो धोको फेरि पनि विविध कारणले अधुरै रह्यो, सबै कारणहरुको विश्लेषण गर्ने सामर्थ्र्य पनि उसको उमेरसँगै क्षीण हुँदै गइसकेको छ । माया पनि धेरै बुढी भइसकिन् अब त नभेटी मरिन्छ होला !
समयले ती दुईलाई परस्पर शत्रु राष्ट्रको नागरिक बनाएपछिका शुरुका दिनमा पश्चिम किनारको सिमानामा काँडाको तार बाहिरबाटै भेटेर रुँदै फर्केको तितो अतित सुनाउँदै गर्दा उसको गला अवरुद्ध हुन्छ । देश फाटिए पनि मन र माया त काँ फाटिंदो रहेछ र ?
मन र भावनाको बहाव विपरीत बगेर पनि जिन्दगीले गति त लिंदो नै रहेछ । जीवनको धेरै लामो बाटो हिंडिसकेको छ उसले, यो यात्राका अन्तिम वर्षहरुलाई सजिलो बनाउन भगवानले मलाई पठाइदिएको हो भनेर ऊ मेरो मन जित्छ । मेरो उत्सुक स्वभावको पनि ऊ अत्यन्तै प्रशंसा गर्छ । नेपाली चौतारीको मेरो लेख देखेर मलाई लाग्छ मभन्दा ज्यादा त ऊ नै हर्षित हुन्छ होला । शुरुदेखि अन्त्यसम्मका एक–एक हरफहरु उल्था गरी गरी सुनाउनु पर्छ ।
हामी धेरै अनुभवहरु साटासाट गर्छौं, यिनै बुढाबुढीको मुहारमा देखिने खुशी र आँसुका रेखाहरु पढ्न हामीले अमूल्य समयसँग सम्झौता गरिसकेका छौं– एउटा सुसारे भएर ।
उसको उच्च अध्ययन अमेरिकामा भएको थियो । त्यहाँ पनि माया उसकी सहपाठी थिइन् । क्यालिफोर्निया राज्यको लस एञजल्समा रहँदाका ती स्वर्णीम दिनहरु ऊ सम्झन्छ । अमेरिकी समाजमा ती अनन्य जोडीले यौटै देशको प्रतिनिधित्वको रुपमा आफूलाई स्थापित गराएका थिए । इम्पेरियल राजमार्ग हुँदै साउथवेस्ट कलेजसम्म आउँदा जाँदा प्रायः माया ऊसँगै हुन्थिन् । कति पटक त मायाले उसैको भान्सामा खाना पकाइदिएकी थिइन ।
त्यसबेला मायासँग जोडिएको इस्लाम धर्मले के फरक पारेको थियो ?
उमेरले माया ऊभन्दा अलि जेठी थिइन होला । उनीहरुको घर सँगै थियो, त्यसबेला । सँगै खेलेर हुर्किएर र अनुभवहरु बाँडेर यौवन र जीवनका असीमित आयामहरु मसँग उसले सिक्ने र बुझ्ने अवसर पाएको थियो । ऊ भन्छ, उसकी पत्नीसँग जति उसको खुशी गाँसिएको छ, त्यसभन्दा कयौंगुणा धेरै मायाका सम्झानाहरू उसभित्र आजसम्म बाँचिरहेको छ । किन, ऊ आफैंलाई थाहा छैन् ।
के ऊ मायालाई मन पराउँथ्यो वा प्रेम गथ्र्यो ? मेरो जिज्ञासालाई पल्टाउँदै यसले यत्ति भन्यो, यदि प्रेमको परिभाषा बदल्न सकिन्छ भने,“उलाइ केन, उलाइ लो” ।
ऊ अरबी मूलको यहुदी थियो र माया इस्लामिक परिवारमा जन्मिएकी थिइन्, उसलाई थाहा थियो उनीहरुको बीचमा सम्बन्ध स्थापना हुनु सामाजिक र धार्मिक अपराध थियो ।
विदा मनाउँदा प्रायः समुद्रको किनारमा जान्थे उनीहरु । पौडन पनि उनीहरुले लगभग सँगै सिकेका थिए । कतिपटक उनीहरु साँझ घोडामा घर फर्किदाका ती रमाइला दिनहरुको बयान सुनाउँदा सुनाउँदै ऊ भन्छ– म तन्नेरीमा तिमी जस्तै थिएँ ।
“क्रिस के तिमीले कहिल्यै ऊँटको दूध पिएका छौ?”
“अहँ छैन, किन र ?”
कहिलेकाही अचानक यसरी प्रसंग मोडेर कुरा गर्ने स्वभाव प्रायः यताका बुढाहरुको हुने गर्छ । यो बुढ्यौलीको दोष पनि हुनसक्छ । तर ऊ प्रसंगभित्रै रहेछ । एकदिन जेरुसलेम घुम्न निस्कँदा उनीहरुले बेस्करी ऊँटको दूध पिए अरे । त्यो बेला माया पनि अलिकति बहकिएको कुरा उसले स्वीकार ग¥यो तर संगसंगै जीवन बिताउने आँट गर्ने शक्ति उनीहरुलाई न त यो धर्मले दियो न त यो समाजले एकपटक मुस्लिम युवकसँग प्रेम गरेको चलचित्र खेलेकै भरमा मनिषा कोइरालाको हत्या गर्ने प्रयास भएको कुरा म सम्झन्छु ।
मान्छेको समाज जहाँ पनि उस्तै त हुँदो रहेछ ।
माया स्पष्ट खुला बिचारकी युवती थिइन । मायामा त्यस्तो धार्मिक दृढता उसले कहिल्यै महसुस गरेन । मायाले इस्लाम परिवारमै विवाह गरिन्, उनीहरु इजरायलबाट विस्थापित भए । हुनत यहुदी समाज र साँस्कृतिक सामाजिक थिचोमिचोसँग सम्झौता गरेर अझ धेरै इस्लामिक समुदाय इजरायलमा मिलेरै बसेका छन् दुखेको कुरा माया त्यो भित्र पनि परिनन् ।
मौसम ऋतु र प्रकृतिका साजहरु बदलिदै गए । कैयन अनिश्चित समयहरु स्वतः स्वीकारित भए र उनीहरु आ–आफ्नो संसारमा हराए ।
कसरी कुनै संयोगवश उसकी छोरी मानव अधिकारवादी सामाजिक संस्थाबाट स्थलगत रिपोर्टको लागि केही वर्ष पहिले पश्चिम किनार जाँदा बुबाको उही पुरानो साथी मायासँग परिचय भएको थियो । ऊ भन्छ, त्यसदिन उनीहरुले दिनभर जस्तो टेलिफोनमा कुरा गरे अरे ।
माया एकपटक जसरी पनि जेरुसलेम आउन चाहन्छिन् । जेरुसलेमको पुरानो शहर धीत मर्ने गरी घुम्ने इच्छा भएको कुरा उनी बारम्बार व्यक्त गर्छिन् । जेरुसलेम उनीहरुलाई मुटुको स्पन्दन जत्तिकै प्यारो छ । सन् १९६७ को अरब –इजरायल बीचमा भएको घमासान युद्ध पश्चात जब जेरुसलेम मुक्तिको घोषणा गरियो, त्यसबेला हजारौं सर्वसाधारण र सैनिकहरुसँग हातेमालो गर्दै उनीहरु पनि जेरिचो हुँदै मृतसागरको सडकतर्फ फैलिएको विशाल बिजयोत्सवमा सहभागी भएका थिए ।
आजसम्म जब जब कतै त्यही समयको हृदयस्पर्शी त्यो संगीत गुञ्जन्छ , ऊ भावविभोर भएर मायालाई सम्झन पुग्छ । माउण्ट मन्दिरको आकाशमा टल्किने सुनको गजुरको चमक जरुसलेमको दिव्य ज्योति हो , ऊ भन्दछ तर यो ज्योति, यहुदीहरूको मात्र होइन, १७ औं शताब्दीतिरका इस्लामहरुले नै यहाँ सुन भरेका हुन् ।
यरुसलाइम शेल जहाव
हो लिखोल शिराइख
ऊ भन्छ शायद हाम्रो लागि लेखिएको त्यही नै अन्तिम दिन रहेछ, त्यसपछि उनीहरुले कहिल्यै त्यसरी जेरुसलेम घुम्न पाएनन् र त्यो दुर्लभ समयको पुनरावृति केवल मन र स्मृतिमा मात्रै रहिरह्यो त्यसैले पनि हुनसक्छ, त्यो गीत त्यति प्यारो भएको । स्वतन्त्रता दिवस तथा राष्ट्रिय सार्वजनिक समारोहहरुमा प्रायः सुनिने यो गीत इजरायलको राष्ट्रिय गान ‘हातिक्भा’ भन्दा पनि लोकप्रिय छ । इजरायलीको मनमा बसेकैले हुनुपर्छ यसले दोस्रो राष्ट्रिय गानको मान्यता पाएको छ ।
धेरै गायकगायिकाले यो गीत गाइसकेका छन् । मेरो आँखाको कोतूहलता पढ्दै ऊ मलाई पूरानो बाकसबाट एउटा क्यासेट झिकेर सुनाउँछ । सुली नतानको सुरिलो स्वरमा स्वरबद्ध त्यो गीत बज्न थाले पछि ऊ भन्छ– माया पनि उस्तै गरी गाउँथिन ।
मेरो भाषामा म यसरी बुझ्छु,
ए धिपधिप प्रकाशले
सुनै सुनको सुवर्ण जेरुसलेम
म तिम्रो संगीतको सितार हुँ ।
संगीतको लयसँगै म प्रसंग जेरुसलेमतिर मात्र केन्द्रित गर्न चाहन्थेँ । अद्धितीय शहर जेरुसलेम प्रतिको मोह यहुदीहरुमा मात्र होइन, सबै धर्मावलम्वीहरुमा उत्तिकै छ । संसारका अन्य शहरहरु तिनको विशालता, भौगोलिक सुन्दरता, आर्थिक सम्पन्नता वा यस्तै अन्य कारणले प्रसिद्ध भएका हुन सक्छन तर पवित्र अध्यात्मिक शहर जेरुसलेम किन अतुलनीय छ त ?
किनकी जेरुसलेम देउताको शहर हो, उनीहरुमा विश्वास छ । जेरुसलेमको अर्थ शान्तिभूमि पनि हो, तर यसैका निमित्त अन्य शहरको तुलनामा सबैभन्दा धेरै वैमनस्य, धेरै संघर्ष र धेरै रक्तपातहरु भएका छन् । धेरै आँसुहरु बगेका छन् । यहाँ बेवोलोनियन, ग्रीक, तुर्की तथा रोमनहरुले एकपछि अर्को गर्दै ३८ पटकसम्म आधिपत्य जमाएका थिए । यही क्रममा यसका संरचनाहरु कैयौंपटक खण्डहरुमा परिणत भए, कतिपटक त बस्ती शुन्य उजाड भयो यो शहर । यद्यपि ईश्वरप्रतिको उच्चतम आस्था भने यो शहरमा सधैंसधैं बाँचिरहेको छ ।
यो धार्मिक क्षेत्र अन्य धेरै राष्ट्रहरुद्वारा पटक पटक अतिक्रमित भई राजनैतिक सार्वभौमिकता अन्तरित भएपनि यहुदी राज्यले मात्र राजधानीको रुपमा स्थापना गरेको हो, यहुदीहरु भन्छन् । यो हाम्रो पूख्र्यौली सम्पदा हो, प्यालेस्टिनीको कदाचित होइन । सन १९४८ अघि जो यहाँ बसोवास गर्थे र आफूलाई प्यालेस्टिनी भन्थे, उनीहरु त कतैबाट आएका आगन्तुक मात्र थिए । तर प्यालेस्टिनीहरु भने यो सत्य नभएको दावी गर्छन । उनीहरुका पिता–पूर्खा र कयौं पुस्ता यहाँ बस्तै आएका थिए। एकाएक सलहसरी आएका यहुदीको जमातले किंवदन्तीको आधारमा आफूहरुलाई जवर्जस्ती धपाएर अन्याय गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
मेरो बुढो साथी भन्छ– यूरोपमा यहुदीहरुमाथि भएको क्रूर अत्याचारको बदलामा विनाकारण यहाँ प्यालेस्टिनीहरुले मूल्य चुकाउनु परेको मात्र हो ।
जेरुसलेम र मायासँग सम्बन्धित स्वर्णीम यादहरुलाई थाति राखेर ऊ मलाई अर्को कथा सुनाउँछ । यहुदी र अरबहरु को थिए के तिमीलाई थाहा छ ? डा. विष्णु चापागाईंले यही पत्रिकाको पहिलो अंकमा लेखेका थिए— “इस्लाम र यहुदीका पूर्खा अब्राहमले सृष्टिको शुरुवात यही स्थानबाट गरेको विश्वास गरिन्छ ।”
एकअर्कालार्इृ देखिनसहने यी दुई शत्रुका पूर्खा कसरी एउटै थिए?
ऊ सुनाउँदै जान्छ — यु्गौं पहिले तिनै अब्राहमलाई ईश्वरको अनुकम्पाद्वारा इजिप्ट देखि समस्त कनान क्षेत्र ( जसभित्र जेरुसलेम पनि पर्छ) प्राप्त भयो । “तिमी र तिम्रा सन्तानहरुले यहाँ राज्य गर्नू” भन्ने उनको आज्ञामुताविक उनका पुत्र इज्याक स्वतः यसको उत्तराधिकारी भए उनैका सन्तति यहुदीहरु हुन् ।
अब्राहमको एउटी सुसारेसँग अबैध सम्बन्ध रहेछ । उनेले इस्मायल नाम गरेको पुत्रलाई जन्म दिइन । उनलाई गृह निकाला गरियो, उनी सम्पूर्ण अधिकारिताबाट बहिस्कृत भइन । इस्मायल जवान भए पश्चात पिताको वंशीय अधिकार प्राप्त गर्ने धोको उनमा सधैं प्राप्त भइराख्यो । उनीहरुले विशाल मरुभूमि परान क्षेत्रमाथि अधिपत्य जमाए । उनैका सन्तति इस्लाम भनिए । इज्याकका सन्ततिहरू चाहि यहुदी भए।
त्यसैले जेरुसलेमका लागि भएको संघर्ष दाजुभाइको झगडा बाहेक केही होइन, ऊ प्रष्ट्याउँछ ।
फेरि हाँसो उठ्ने गरी ऊ यो पनि भन्छ— ईश्वरले त हामीलाई बस्नका लागि मात्र ठाउँ दिएका हुन, कुनै ग्रहको एक टुक्रा जमीन पनि कसैको होइन । यदि जेरुसलेमका नाममा सधैं युद्ध भइराख्यो भने उनले यसलाई विशाल पत्थरमा रुपान्तरित गरिदिनेछन् र, अनि जसले यसलाई छुन खोज्छ उसैलाई चोट लाग्नेछ ।
जेरुसलेमबाट पूर्वतर्फ जैतुनको पहाडमाथि हरेक प्रभात चियाउने सूर्यको किरणले सम्पूर्ण विश्वमा आस्थाको ज्योति टल्किरहेझै देखिन्छ । उत्तर दक्षिण फैलिएका पहाडहरुले घेरिएको यो उपत्यका भित्रको सुवर्ण शहर जेरुसलेमलाई इजरायलले अत्यन्त जतनले सुरक्षा र सम्मान गरेर राखेको छ । करीब ३००० वर्ष पहिले राजा डेविडले यहाँ राज्य गरेका थिए । यहुदीहरु भन्छन्— “त्यही बेलादेखि नै हाम्रो राजधानी जेरुसलेम हो ।”
शहरको मध्य भागमा रहेको माउन्ट मन्दिरको रहस्यमय अलौकिकता अवर्णनीय छ । विभिन्न समयमा विभिन्न शासकहरुद्वारा पटकपटक विनाश र पुनर्निर्माण हुँदै आएको यो धार्मिक सम्पदा पुरातात्विक, साँस्कृतिक र राजनैतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील रहेकोले धेरै मुलद्धारहरु निषेधित छन् । यहीँ अवस्थित अल अक्सा अस्जित र इस्लामिक धार्मिक स्थलले गर्दा मुस्लिमहरुका निमित्त पनि माउन्ट मन्दिर (माउण्ट मोरिया) उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
ईशापूर्व ९६७ मा सोलोमनले बनाएको यो मन्दिर ईशापूर्व ५८६ मा वेविलोनीयनहरुले नष्ट गरेका थिए । फेरि ईशापूर्व ५१६ मा पुनर्निमित दोस्रो मन्दिर पनि ईशापूर्व ७० मा रोमहरुद्वारा भत्काइए पछि तिनका बाँकी अवशेषहरुबाट निर्माण गरिएको लामो पश्चिमी पर्खाल (western wall)ले यहुदीहरुको पराजय, आँसु र शोकमय सम्झनालाई प्रतिविम्वित गर्छ ।
गल्ली गल्लीमा यहुदीहरुको रगतको धारा बगुञ्जेलसम्म टाइटसका निर्दयी सैनिकहरुले आक्रमण गरिराखे । संसारभरिका यहुदीहरू यही दिशातर्फ फर्किएर प्रार्थना गर्छन ऊ भन्दै थियो —प्रत्येक दिनको हाम्रो प्रार्थना तेस्रो काल्पनिक मन्दिरसँग सम्बन्धित छ, जुन यही स्थानमा निर्माण हुनेछ, जब यहुदी देवदूत यस धर्तीमा प्रकट हुनेछन् ।
जेरुसलेमको बयानभन्दा फेरि उसलाई मायाकै सम्झना गाढा भएर आउँछ । हाइफा, गोलान क्षेत्र तथा पवित्र शहर जेरुसलेमका पर्खाल, चर्च, मन्दिर र मश्जिदहरुमा शायद उनीहरुको पनि कथा लुकेको छ । उनीहरु घुमेका पाइलाका डोबहरु त्यही बेला मेटिएर गएपनि कहिलेकाही एकान्तमा त्यही पदचापको आवाजले ऊ झस्कन्छ ।
मायाविनाको उसको हरेक स्मृति अधुरो–अधुरो छ । डेविड टावरबाट उनीहरु घण्टौ जेरुसलेमको पुरानो शहर नियाल्थे रे कहिलेकाहीँ त जाफा गेटबाट ऊटमा चढेर भित्र पसेपछि साँझ परेको पनि हेक्का रहँदैनथ्यो रे । त्यो निकै पुरानो समयको कुरा थियो । मुस्लिम, यहुदी वा क्रिश्चियनहरुका आ–आफ्ना चोक, क्षेत्र तथा गेटहरु छन् यहाँ । “भाया दोलोरोसा” अर्थात जिसस क्रुसमा टाँगिएर दुख्दै हिडेको त्यो वेदनाको बाटो पछ्याउँदै कति क्रिश्चियन तीर्थयात्री हरेक वर्ष यहाँ आएर उनको दुःखद सम्झना गर्छन् ।
जिसस क्राइष्टको जन्म र मृत्यु यहीं भएकोले क्रिश्चियनका लागि पनि यो क्षेत्र उस्तै धार्मिक महत्वको छ । त्यसै देउताका शहर कहाँ भनिएको हो र ?
नयाँ वर्ष “रोश हा सना” मा हामी धेरै खशी भयौं । हरेक नयाँवर्ष जस्तै यसपाली पनि शोफारबाट निस्किएको पवित्र त्तयनी धर्म र यसका कथाहरु कुँदिएका यी पहाडका पर्खालहरुमा प्रतिध्वनित हुँदै जेरुसलेम र सम्पूर्ण इजरायलभरी गुञ्जियो । हाम्रो हिन्दू धर्ममा शंख जस्तै महत्व रहेको यो शोफार एक प्रकारको विगुल हो जुन भेडाको सिंगबाट बनाइन्छ । यससँग यिनीहरुको धार्मिक र पारम्परिक महत्व गाँसिएको छ ।
योम किपुरको अन्तिम दिन , शोफार बज्नेबित्तिकै कुन्नी कुन सम्झनाले डो¥याएर हो मेरो बुढो साथी चुपचाप पियानो बजाउँदै थियो । म देख्छु, पुरानो शहर बाहिर हवाइमील अगाडि खिचिएको मायाको तस्वीर सामुन्ने मानौं ऊ कुरा गरिरहेको छ । मुस्काइरहेको उनको तस्वीरको पृष्ठभूमिमा मोन्टोफोरको हवाइपंखा टक्क अडिएको थियो यस्तो प्रतित हुन्थ्यो कि उसको स्मृतिमा त्यो समय पनि त्यसरी नै टक्क रोकिएको छ ।
म सुन्दै जान्छु,
बिस्तारै ऊ त्यही गीत गुनगुनाउँछ,
जेरुसलायम सेल जहाव…………..।
Remake Verson by Liel Kolet
Remake Verson By OFRA HAZA
Original verson by Suli Natan
मित्रताको आयु र गौरीपुर हाउस
i red it before also when it was published on nepal chautari but still it has same smoothness as before it was.u have different style of presentingastory this is what i like most.reallyagreat story krishna bro keep it up.
जटिल कुराहरु समेटिएको यो रचना सरल र सुन्दर पनि त्यत्तिकै छ | यहाँलाई बिजया दशमीको हार्दिक शुभकामना !
thank you chaitanya and umesh jee for your nice comments.
SHARADA KHAREL(SITAULA) says:
I MOST SAY SOMETHING ABOUT THIS BEAUTYFUL PRESENTATION BY KRISHNA THAPA,MAILE PANI DOHORAYERA PADHE, TAPAIKO BUDHO SATHIKO PREM KATHA, RA, JERUSALAM KO KATHA, DHERAI ROCHAK LAGYO, MITHO SAILIMA LEKHNU BHYEKOMA, THANKS A LOT, KRISHNA JI.GOD BLESS YOU.